Malunga nathi - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Ulwazi malunga nenkampani Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd
Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd., ikhowudi yesitokhwe: 300453, yasekwa ngo-1997. Ishishini lesizwe eliphezulu-lobuchwephesha eligxile kwisixhobo sezonyango i-R & D, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo. Emva kweminyaka engama-20 yokuqokelela, inkampani inombono wehlabathi, ilandela ngophuhliso lwesizwe Izicwangciso-qhinga, ukulandela ngokusondeleyo iimfuno zeklinikhi, ukuxhomekeka kwinkqubo yolawulo lomgangatho ovakalayo kunye ne-R & D evuthiweyo kunye neenzuzo zokuvelisa, kwaye ukhokele kolu shishino ukupasa inkqubo ye-CE kunye ne-CMD yoLawulo lomgangatho kunye nokuqinisekiswa kwemveliso kunye nokugunyaziswa kwe-US FDA (510K) yokuthengisa. Ukusebenza ngenkuthalo kunye nokulandela ukugqwesa, ngoku sele ikwenzile kwaba yinkampani edwelisiweyo kwicandelo lokucoca igazi lasekhaya kuyo yonke imveliso yesisombululo. Ikwangowokuqala kunye nenkampani ekuluhlu kuphela kwishishini lezixhobo zonyango kwiPhondo laseJiangxi.
Ngaphezulu kweminyaka engama-20, iSanxin Medtec ibisoloko iqhubekeka nokwenza imveliso yayo kwaye itshintshe ngempumelelo kwaye inyuselwa kwicandelo lokumnika ngokwesiko, iba yenye yeenkampani ezimbalwa zasekhaya ezinokubonelela ngezisombululo kulo lonke ishishini lokuhlanjululwa kwegazi. Sibonelele ngeenkonzo ezingaphezulu kwesigidi se-120 samaxesha e-dialysis kunye neenkonzo zokugonya ngaphezulu kwamaxesha angama-800 ezigidi kwiziko lolawulo lwezifo. Ngoku sinezatifikethi zamalungelo awodwa omenzi wechiza ezingaphezu kwama-80, ngaphezulu kwezatifikethi zobhaliso zemveliso ezingama-80 kwaye sithathe inxaxheba ekuyileni imigangatho eli-10 yesizwe kunye neyamashishini. Iimveliso zethu zithengiswa kumazwe angaphezu kwama-60 nakwimimandla. Inkampani iphonononga ngenkuthalo indlela entsha yophuhliso lweshishini kwaye iseke ubeko lophuhliso lwesizwe olujolise kwiJiangxi. Ezona mveliso zazo ziphambili zigubungela uthotho lokuhlanjululwa kwegazi, iicatheters ezihlala ngaphakathi, inaliti, utofelo-gazi, utyando lwe-cardiothoracic kunye nokhuseleko.
Imigangatho yesizwe / yemizi-mveliso
Indawo yokusebenzela ezenzekelayo
Kumashumi ambalwa eminyaka adlulileyo, iSANXIN iphendule ngenkuthalo kwimfuno yentengiso yemveliso efanelekileyo. Hlanganisa izixhobo zangaphakathi zoshishino kunye nokudibanisa iteknoloji yolwazi ukudala izisombululo zolawulo lweeworkshop. Ngelixa ufezekisa imveliso ekrelekrele, ikwazisa nemveliso yexesha-lokwenyani yokulandelela idatha, utshintsho lwexesha langempela, kunye nokujonga kokujonga ixesha elifanelekileyo, okunciphisa ngokuthe ngcembe ukungenelela kwabantu, ukuphucula umgangatho wemveliso kunye nexesha lokuhambisa, kunye nokuzisa ulawulo olululo.